Soo dejisan Stellarium 0.20.4 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Stellarium
Stellarium – software ah la muuqaalada Panetarium dalwaddii in uu soo bandhigo samada lagu baxinayay 3D. Stellarium ka dib images in tayo sare leh iyo bandhigayaa ah meerayaasha nidaamka qoraxda, Burjiyo, satalayt aan dabiici ahayn Dhulka, xiddigaha badan iyo waxyaabaha kale ee bannaan oo dibadda ah. Stellarium taageertaa muuqalaynta waaberiga qorraxda, milicsiga ee nebulae iyo view of xiddiga reer mesh nidaamka Equatorial ama azimuthal duwo marayo. Software ka kooban qalab reserved Saaxada iyo daahfurnaanta jawiga. Stellarium sidoo kale taageertaa plugins iyo qoraallada badan in uu soo bandhigo nidaamka xiddiga dheeraad ah.
Bandhigay tayo High
Xiddigaha badan iyo waxyaabaha kale
Management of taliskoobka
Jilidda of qorrax madoobaad
Soo dejisan Stellarium
Faallo ku saabsan Stellarium
Stellarium Xirfadaha la xiriira